Iyo Yekutarisa Yevacheche Mawiricheya
Kune chero munhu anofanirwa kuvimba ne kufamba mudziyo, ivo vari kupotsa pane imwe yerusununguko rwavo rwese. Izvi zvinogona kukanganisa vakuru asi zvakanyanya kuvana. Ine nhamba ye kufamba sarudzo dzakaringana, chiremba wiricheya inofanirwa kutariswa zvakanyanya pakupa kufamba zvevana.
Kana iwe uri kutarisa kutenga yakashandiswa wiricheya, iwe unofanirwa kutora zvinhu zvishoma mukufunga. Kana mwana wako achida a kufamba chigadzirwa chero chikonzero, chiremba wako achakubatsira kudzikisira pasi sarudzo dzemwana wako. Vanozonyatsoongorora mwana wako nekukurudzira zvakakodzera wiricheya yezvavanoda.
Chinhu chekutanga chinotariswa nachiremba kugadzikana uye pekugara zvinodiwa nemwana. Kana mwana akaderera kana asina kugona kubata, chiremba wako anokurudzira zvakakodzera wiricheya. Vanachiremba vanozoona kuti mwana agadzikana uye akachengeteka uye kuti mushini wakakodzera urikushandiswa.
Iko switch kana yemufaro ichashandira izvo zvinodiwa nemwana wako? Izvi zvakakosha kuti uone kana uchisarudza sachigaro's control system. Ikoko kune kwakasiyana kwevana wiricheya inowanikwa. Chiremba wako anogona kukubatsira kudzikisira sarudzo dzako uye nekukunongedzera munzira yekukodzera wiricheya kumwana wako.
Pediatric Chairs inogadziriswa mune Dzimwe Kesi
Aya marudzi ezvigaro anouya nemhando dzakasiyana dzekumisikidza marongero anobvumidza mwana wako kuti afambe asina kudzivirirwa. Macheya aya anouyawo neruoko, gumbo uye tsoka kuzorora zvakakura zvinowedzera zvinogona kugadziridzwa apo mwana wako anokura.
Mwana wako anofanirwa zvakare kutora chinzvimbo chinoshanda mukusarudzwa kwavo wiricheya. Iwe unozofanirwa kufunga nezve vhiri rinotyaira uye kumhanya kwechigaro uye kuti zvinokwana sei nemararamiro emwana wako.
Kumashure Wheel vs Front Wheel Dhiraivha
Yega vhiri dhiraivha ine zvayakanakira nezvayakaipira. Rear wheel drive mavhiripu uve nekumhanya kwakanaka asi rakanyanya kutenderera nharaunda, isina kunaka kune diki nzvimbo. Mberi vhiri rekutyaira wiricheya ivai nekumhanyisa kwakafanana uye nharaunda iri nani yekutendeuka.
Iyo yepakati-vhiri kutyaira mavhiripu vane nharaunda yakanakisa yekutendeuka asi havasi ivo vanokurumidza senge yekumberi kana yekumashure kutyaira vhiri. Matai nehupenyu hwebhatiri zvakare zvinofanirwa kutariswa muchisarudzo chekupedzisira.
Wako mwana wiricheya inofanirwa zvakare kutakurika nyore nyore kune imwe nzvimbo kuenda kune inotevera. Izvi zvinowanzoenderana nefuremu mhando yeiyo wiricheya uye zviri nyore sei kuchengeta kana isiri kushandiswa.